Funda ngeZakhiwo zokuBala zeBraw
I-Straw Bale Construction Yakhiwa
I-Straw ingenye yezinto zokudala zehlabathi, kwaye zinamandla kunokuba ucinga. Ukuvunwa kwimihlaba yengqolowa, ilayisi, i-rye, i-oats, kunye nezityalo ezifanayo, utshani bubuxhakabungqina bomhlaba kunye nobungakanani bentela. Iibhali ezixinezelekileyo zingagcinwa, ziqiniswe ngeendonga zensimbi kwaye zifakwe kwisakhiwo sendlu. Iindonga zamehlo ezinqabileyo zomelele ngokwaneleyo ukuba zithwale imithwalo enzima. Iibales zitshisa ngokukhawuleza kunokuba zikhuni kwaye zibonelele ngokugqithiseleyo.
Kwimihlaba yaseAfrika, izindlu zenziwe ngotshani ukusuka kumaxesha asePalolithic. Ukwakhiwa kwamatye kuye kwaziwa kwi-American Midwest xa oovulindlela bafumanisa ukuba akukho nto yokukhathazeka nokukhukhumeza yayiza kubetha iibales ezinobuncwane. Ngokukhawuleza abalimi baye bafunda ukumbatha iindonga, ngokukodwa iingaphandle zangaphandle, kunye ne-plaster ezenziwe ngeebhiya. Xa kusetshenziselwa utyani lwe-hay, izilwanyana zaziza kudla ngesakhiwo. I-straw iyona mveliso yenkcitho yokutya okuziinkozo.
Abacwangcisi kunye neenjineli ngoku bahlola amathuba amasha okwakhiwa kwebala. Usuku lwangoku "ooovulindlela" abakhayo kwaye bahlala kule mizi bathi isakhiwo esinomsila kunokuba izinto eziqhelekileyo zinciphise iindleko zokwakha malunga nesiqingatha.
Iintlobo ezimbini zoLwakhiwo lweBlaw Bale
Iibhali zisetyenziselwa ukuxhasa ubunzima bephahla. Le ndlela isebenzisa iindonga zensimbi ngokusebenzisa iibales ukuze zomelezwe kwaye zizinzileyo. Izakhiwo ngokuqhelekileyo ibali elilodwa, izakhiwo ezilula.
Iibhali zisetyenziselwa "ukuphelisa," njengezinto ezidityanisiweyo zodongeni, phakathi kweengxowa zesakhiwo esakhiwe ngesakhiwo. Uphahla luxhaswa lulolu hlobo kwaye alukho iibhande zengca. Izakhiwo zinobugcisa obunzima kwaye bunkulu.
Emva kokuba iibhali zeentambo zikhona, zikhuselwe ngeengubo ezininzi ze-stucco.
Indlu ye-bale ye-straw okanye i-cottage ibonakala ngathi nayiphi na enye indlu ye-stucco. Kodwa qaphela ukuba ezininzi zokupheka zikhona kwi-stucco. I-bales i-straw idinga umxube webumba otywala, kunye neengcali zengca ye-straw (kungekhona ingcali ye-stucco) kufuneka ixoxwe.
Ngomsebenzi wokwakha uBraw
Jonga iifoto zendlu ye-straw bale kwi-strawbale.com, "iNkokeli yehlabathi kwi-Straw Bale Education" ngo-Andrew Morrison, i-StrawBale Innovations, LLC, e-Ashland, e-Oregon
I-Straw Bale Construction kusuka ku-SustainableSources.com
I-Straw Bale House Construction, iDancing Rabbit Ecovillage, Rutledge, eMissouri
I-Straw Last, i-International Journal ye-Straw Bale kunye neZakhiwo zendalo
Funda ngakumbi Kule ncwadi
Izicwangciso zasekhaya zaseStwbale zikaWayne J. Bingham kunye noColen Smith, ngo-2007
Ulwakhiwo olungakumbi lweBraw: Isikhokelo esipheleleyo sokuKwakha kunye nokwakha ngetyala likaChris Magwood, ngo-2005
Isakhiwo seBraw Building: Indlela yokucwangcisa, ukuyila nokwakha nge-straw nguChris Magwood noPeter Mack, 2000
Ukwakha i-Straw Bale House: I-Handbook ye-Red Feather Handbook kaNathaniel Corum, iPrinceton Architectural Press, ngo-2005
I-Straw Bale enkulu: Isikhokelo sokuKhaya saseKhaya kuzo zonke iimozulu ngePaul Lacinski kunye noMichel Bergeron, i-Chelsea Green Publishing, ngo-2000
Ubuhle bezindlu zeBlaw Bale izindlu ngu-Athena noBill Steen, i-Chelsea Green Publishing Inkampani, ngo-2001
I-Strawbale encinci nguBill Steen, uAthenna Swentzell uSteen, noWayne Bingham, ngo-2005
Ukuxhamla okuqhubekayo ngu-Alan Boye, iYunivesithi yaseNebraska Press, ngo-2014
Yakha ngeBales ngo-Matts Myhrman kunye ne-SO MacDonald, ngo-1998
Yintoni Igumbi Elikhuselekileyo?
Indlela Yokubamba Ukukhuselwa Kwezomthetho Neenjongo
UFundo lwezithombe zeRafael Nadal Forehand
Ngaba I-Online School Ikulungele Umntwana Wethu?